Toy ny mividy fiara, mividy ny ampiasaina RV (Fialam-boly Vehicle) na mpilasy dia mety ho fomba lehibe ny hahazo ny mahatahotra fifanarahana. Toy ny fiara, Ny very RV sarobidy ny fotoana dia entin'ny eny ny filokana. Fa, tokony mba hiarovana ny tenanao sy ny fampiasam-bola rehefa manao fikarohana kely momba ny RV ianao mihevitra amin'ny fividianana.
Jereo An RV Vin Number eto
Toy ny fiara, RV ny manana vin, (fiara famantarana maro) ka dia any amin'ny toerana maro samihafa ao amin'ny iray RV. Izy ireo matetika apetraka amin'ny toerana iray izay ny fiara hanana azy, tampoka tao anaty fiara ary dia tokony ho afaka hahita azy io amin'ny alalan'ny mijery amin'ny alalan'ny ny anoloan'ny ny windshield. Na izany aza, fa tsy foana ny raharaha. Mpanamboatra no nataony tao amin'ny toerana samy hafa toy ny maotera sy ny sisiny. Azonao atao ihany koa ny mijery ny fototra fanohanana (radiatera fanohanana) , eo amin'ny mamily andry, mpamily na ny mpandeha varavarana na ny tolam-baravarana, ary indraindray eo amin'ny Rindrin'afo. Azonao atao ihany koa ny mijery ny boky tompony mba hahitana raha toa ka tanisaina ao, fa izany no tsara indrindra ny manamafy fa ny isa dia mitovy tahaka izany izay eo amin'ny RV.
Raha manana azy ny tompony, azonao atao ihany koa ny mijery ny antontan-taratasy fividianana, lohateny sy ny fiantohana Docs. Ny vin, dia tsy manam-paharoa ny RV, maotera roa an-trano tsy mitovy ny iray, noho izany dia zava-dehibe ny mahazo ny vin, isan'ny tsara.
Toy izany koa fa ianao no mijery ny vin, ho an'ny fiara izay mihevitra ianao mividy, ianao dia afaka mampandeha ny RV vin, maso ihany koa. Tatitra ity no hanome anareo izay vaovao mikasika ny fiara mihitsy, RV decoder iray izay milaza ianareo izay ny mpanamboatra dia, izay naorina sy safidy avy amin'ny mpanamboatra sy ny enginge sy ny fandefasana vaovao.
Amin'ny alalan'ny mandeha ny RV vin, fikarohana maro no manan-danja hafa koa hitanao vaovao, toy ny raha ny RV efa voalaza tao amin'ny loza sy ny be dia. Koa raha niova ny RV tanana fotoana vitsy dia mampitandrina anao mba azo atao odometer olana na ny horonan-taratasy lamosiny. Izany koa dia mitanisa raha misy azo atao Liens eo amin'ny RV fa ny tompony tsy vokany. Ary farany dia mety maneho ny misy mety mampahatsiahy fa tsy mbola miresaka.
Raha manao ny RV vin, hanamarina afaka vonjeo ny tenanao sasany mety ho aretin'andoha nidina ny lalana ary tsy mora ny fiantohana ho an'ny sasany fiadanan-tsaina rehefa mividy ny ampiasaina RV.